အဆိုပါ PC ကိုသတိပေးမှုအပေါ်တစ်ဦး function ကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အဆိုပါ PC ကိုသတိပေးမှုအပေါ်တစ်ဦး function ကိုဖန်တီးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါအစီအစဉ်၏မုဆိုးမကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ PC ကိုအပေါ်တစ်ဦးသတိပေးချက်ဖန်တီးရန်အနည်းငယ်သည်းခံခြင်းနှင့်လုံ့လဝိရိယ်ယူဖို့လိုအပ်ပေမယ့်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
ကျနော်တို့ကအောက်ပါ sequence ကိုအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်:
menu က Start,
အဆိုပါဖွင့်လှစ်ဝင်းဒိုးကိုညာဘက်ဒုတိယအတန်း Quote ခုနှစ်တွင်; ရိုးရှင်းသော zadachuquot Create; ဒါကြောင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
napominaniequot; ကျနော်တို့နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. Quote ရေးလိုက်ဘယ်မှာဥပမာရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်, Create; နှင့်လိုင်း quote; Opisaniequot; သငျသညျသတိရချင်ကြောင်း, Pozvnit မိတျဆှေနှင့်သူ၏အမည်ကိုပြောပါ။
ဒါဟာစတာတွေ, တရားဝင်အချိန်ကိုဒေတာဖြည့်ဖို့ကမ်းလှမ်းဖြစ်နေဆဲ အစဉ်အမြဲ Quote အဖြစ်ကိုနှိပ်; OKquot;
ဖြစ်ရပ်များ၏ Options ကိုသတိပေးချက်များ enabled သို့မဟုတ် onlan အစီအစဉ်ကို Yandex သို့မဟုတ်စာတိုက်ပုံးများမှတဆင့်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး function ကို Quote ဖြစ်၏ Napominaniequot;, Window7အပေါငျးတို့သသည်အသုံးပြုသူများမှမရရှိနိုင်ဖြစ်၏။ ဒါဟာတခါတရံအလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဒါဟာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒီတူ: ပေးထားသောအချိန်ထားသောစာပိုဒ်တိုများသင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးခဲ့သောကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သင်တို့မျက်မှောက်၌ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဤသည်အရေးပါသောခေါ်ဆိုခဒါမှမဟုတ်တချို့နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုသတိပေးမှုရှိနိုင်ပါသည်။
မည်သူမဆိုကို Windows7တွင်ထည့်သွင်း tools တွေကိုသုံးပြီးသတိပေးချက်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ထိုသို့ပြုမှအတော်လေးလွယ်ကူသည်။ အကြောင်းမူကား, start ကြပါစို့:
1.otkryvaem အစီအစဉ်ကို Quote; Scheduler ကို zadaniyquot; ။
ခလုတ်ကို Quote နှိပ်; Puskquot; နှင့် tab ကို Quote ကို select; အားလုံးသည် programmyquot ;;
ထို့နောက် tab ကို Quote ကို select; Standartnyequot ;;
ဒီ tab မှာ Quote vybiraes; Sluzhebnyequot ;;
အစီအစဉ်များ၏တရားဝင်စာရင်းထဲတွင်နှင့် Quote ဖြစ်၏ Scheduler ကို zadaniyquot; ။ လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သငျသညျ, ထို program window ကိုမြင်သော Quote အတွက် tab ကို select လုပ်ပါလိမ့်မည်ရိုးရှင်းတဲ့ zadachuquot ဖန်တီး; action ကိုစာရင်းထဲတွင်။ ဥပမာ, Quote နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. (အမည်) ၏စွပ်စွဲပြဿနာကိုမေး; 1quot သတိပေးချက်; နှင့် button ကို Quote နှိပ်; Daleequot; ။
Устанавливаем периодичность напоминания, например — один день, нажимаем кнопку quot;Далееquot;.
အဆိုပါသတိပေးချက်ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာပေါ်လာသငျ့သညျလာသောအခါညာဘက်အချိန် Set, ခလုတ်ကို Quote နှိပ်; Daleequot; ။
5.Выбираем необходимое действие — quot;отобразить сообщениеquot;, нажимаем кнопку quot;Далееquot;.
В окне quot;сообщениеquot; пишем текст сообщения, который мы хотим видеть на экране. Нажимаем кнопки quot;Далееquot; и затем — quot;Готовоquot;.
ကျွန်ုပ်တို့၏သတိပေးချက်ဖန်တီးခဲ့သည်။ napominpnie နေသူများကဖန်တီးသောဤလုပ်ရပ်များပေးထားသောအဆက်အသွယ်အချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ window ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးနောက်။
Через какое-то время это напоминание становится не актуальным — так его можно удалить. Это сделать ещ проще, чем его создать: в левой части окна quot;Планировщика заданийquot; (как этот планировщик находить мы уже знаем) выбераем вкладку quot;библиотека планировщика заданийquot;. В окне программы открывается весь список запланированных задач. Находим свою quot;неактуальнуюquot; задачу, кликаем по ней правой кнопкой мыши и в выпадающем контекстном меню выбираем пункт quot;Удалитьquot;.
ဤတွင်, ယေဘုယျအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်။ ကံကောင်းပါစေ!